Myanmar OA6: မဲပေးကြပြီ
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 3:43 PM
ကောင်းတယ် .. ကျွန်တော်က သံရုံးစိုက်တဲ့ မြို့မှာ မဟုတ်လို့ နေမယ် အကြောင်းကြားစာ မရောက်သေးဘူး :P
မောင်ပွတ်ရေ.. ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို မင်းလိုပဲ ကိုကဒေါင်းလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်လာတယ်ကွ။ အဟဲ.. အစ်ကိုတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တောင် သတိမရပါဘူး။ သွက်သွက်လေး လှုပ်ရှားပြီး စာအိတ်ပိတ် ပုံးထဲထည့်လိုက်တာပဲ။ တော်ကြာ နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးကြီး စိတ်ပြောင်းသွားလို့ ဆန္ဒမဲတွေ လက်မခံတော့ဘူး ကြေညာမှာ စိုးလို့။
According to the latest news from Burmese Embassy in the United Kingdom, all burmese embassy staff already voted "NO" and they encourage all people to vote "NO" in the referendum as they understand the current situation of Burma and they want to get the real Democracy.
On Saturday, thousands of people came and voted "No", they added.
Therefore, please go to Burmese Embassy for voting on Sunday or Monday between 9am and 4pm.
19 A, CHARLES STREET,
You are right . Voting is our first right
yes or no is also our own choice!